I-RIP: Zonke iiNgcaciso zakho ziMat | Martech Zone
I-RIP: Onke amaZiko oLwazi akho kuMat
NgoLwesine, uJuni 17, 2010 Lwesine, Okthobha 29, 2015 Douglas Karr
Itekhnoloji yehlabathi ilahlekelwe ngumntu okhethekileyo izolo, mhlobo UMateyu S. Theobald. UMatt wayengumntu omangalisayo kwaye okrelekrele, ephuhlisa kwaye eyila iindlela zokukhangela idatha yehlabathi kwi-Intanethi. Ndabhala malunga Ngaphakathi emva kokudibana noMat emva kwesiganeko esincinci saseIndiana saseIndiya kunyaka ophelileyo.
UMatt wayenombono kwaye wawulandela engadinwa. Ukugqibela kwam ukumbona, wayenovalo lokutshaya ngaphandle kwesangqa. Ndamazi kwaye sagqiba ekubeni sithethe ngombono wakhe, usapho lwakhe, i-Indianapolis kwaye sabelana ngamabali aphambeneyo. Sahleka kakhulu. Emva kweeyure ezimbalwa, ndamqhubela ekhaya kwaye kwafuneka ndichazele abantwana bam ukuba kutheni ndishiywe lixesha ngeeyure ezi-4. UMat wayeluhlobo lomntu-wayekutsala nje kwaye awunakunceda kodwa uzive ngathi unomhlobo wakudala phesheya kwetafile kuwe.
Ndizokukhumbula ukuva ilizwi likaMatt elinomsi, ukukhohlela kunye nokuhleka kumnyhadala wethu omncinci waseIndiana. Ndiyazi ukuba wayesokola ngamanye amaxesha, wayeyedwa kubukrelekrele bakhe kwaye wayengenayo inkxaso exhasa ukutyhala umbono wakhe. Ndiyazi kananjalo ukuba umbono wakhe ngeke Ibe yinyani, nangona kunjalo, kwaye ndimxelele ukuba ixesha ngalinye sithetha. Isenokungabi linombolo ye-Intanethi yokuKhangela kwi-Intanethi ezisa kwiziqhamo, kodwa inkqubo efana nayo yokulungiselela idatha kwi-Intanethi iyakuba yinyani ngenye imini.
UMat undishiyele imiyalezo embalwa kuFacebook ukuze bahlangane kwaye baphume baye kwisidlo sasemini kunye naye. Ndandixakeke kakhulu, nangona kunjalo, kwaye sasingakwazi ukudibana. Ngomvulo ndizokwenza ixesha lokuvalelisa kumhlobo wam.
Umngcwabo kaMat uya kuba ngoMvulo ngo-6/21, ngo-12: 223, eCrown Hill Cemetery Entla yokungena. (Isiza somngcwabo wengcwaba XNUMX)
Ngaba ikuku yakho yenkukhu S ** t Inkampani isakwamkela ukusilela?
Juni 19, 2010 ngo-12: 52 PM
Juni 19, 2010 ngo-3: 41 PM
Mna noMat sasinedinga lokudibana ukuze siphunge ikofu ngoLwesine. Wayenemincili ngencwadi yam entsha, kwaye ndandiza kumsa ikopi ngokobuqu.
Ndacinga ukuba ayimangalisi into yokuba angaveli, ethathela umdla wakhe oqhelekileyo. Ndicinge ukuba inokuba ubotshiwe ngento kwaye ndiza kujikeleza kwiveki ezayo.
Uxolo sikhumbula omnye nomnye, Mat. Ndizokuvalelisa ngomvulo.